မိသားစုများအတွက် ပံ့ပိုးမှု - Together
ကင်ဆာအမျိုးအစားကဘာလဲအမျိုးအစား? ကင်ဆာအမျိုးအစားကဘာလဲအမျိုးအစား? Thyroid Cancer Leukemia Lymphoma Brain and Spinal Tumors Neuroblastoma Osteosarcoma Ewing Sarcoma Wilms Tumor Retinoblastoma Soft Tissue Sarcoma
သင့်ရဲ့ခရီးဇာတ်စင်ကဘာလဲ? သင့်ရဲ့ခရီးဇာတ်စင်ကဘာလဲ? Newly Diagnosed In Treatment Off Treatment Relapsed Long-Term Survival Bereaved
မင်းဘယ်သူလဲ? မင်းဘယ်သူလဲ? Patient Parent or Caregiver Friend Health Care Professional Other
မိသားစုများသည် ကင်ဆာကြောင့်ခံစားရသော အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ အတွေ့အကြုံများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိသည်- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာနှင့် လက်တွေ့ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ။ ကလေးဆိုင်ရာကင်ဆာ ခံစားနေရချိန်အတွင်း မိသားစုများ ရင်ဆိုင်ရသော နေ့စဥ် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက် အရင်းအမြစ်များ ရှာဖွေပါ။
Stay Connected to Classmates
စောင့်ဆိုင်းနေရစဉ် အချိန်ကို ကုန်လွန်စေမည့် နည်းလမ်းများ
ဧည့်တွေ့ခန်းသည် ကလေး ၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာလူနာများ၏ မိသားစုများအတွက် အချိန်ကုန်ဆုံးစေနိုင်သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံမှုများအကြား စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ပြုလုပ်ရန်ရှိသည့်အရာများအကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူပါ။